Thursday December 06, 2018 - 11:54:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee AFRICOM loo yaqaan ayaa lagu sheegay in ciidamo American ah ay qeyb ka ahaayeen weerarkii fashilmay ee habeen hore ka dhacay degmada Awdheegle.
Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in ciidamadeeda oo caawinaya maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ay weerareen Awdheegle kadib markii ay khatar lakulmeena ay adeegsadeen duqeymo xagga cirka ah.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in duqeymaha ay geysteen diyaaradaha Drone-ka Mareykanka aysan wax khasaara ah geysan balse AFRICOM waxay ku doodeysaa in duqeynta ay ku dishay afar kamid ah ciidamada Al Shabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa si toosa iyo si dadban ugu lug leh duullaanka islaam ladirirka ah ee lagusoo qaaday dalka Soomaaliya, Americanka ayaa xasuuq aan loo meel dayin ugeysanaya dadka shacabka ah.
Taliban Oo Diyaarad B52 ah Mareykanka Ugasoo Ridday Koonfurta Afghanistan.